Nezvedu | Sichuan DeepFast Mafuta Kuchera Zvishandiso Co., Ltd.
DeepFast ndeimwe yevanonyanya kupa zvigadzirwa zvemafuta ekuchera zvigadzirwa nemasevhisi muChina. YakadzikaFast Oiri Kuchera Zvishandiso Co., Ltd. inonyanya kuita madhaimani ekuboora matimu emhando dzakasiyana uye saizi kubva pa3 inch kusvika 26 inch uye mamwe maturusi ekuchera. Iine Japan 5-axis NCPC neGerman Yemazuva lathe, DeepFast inogadzira gore rega rega zviuru zvisere zvemadhaimani mabhuru uye 2000 yekudonha mota. Kunyangwe yakareba-yakareba ichishandira pamwe neSouthwest Petroleum University, kambani yedu inotsvaga uye inogadzira kupaza kwedombo mukuumbwa kwakaomarara nebhenji rekuyedza. Kusvikira ikozvino, inowana 47 patents iyo inosanganisira 2 American patents, 2 Russian patents, 43 Chinese patents. Kambani yedu inotarisa pane mhando neepamberi tekinoroji uye kwakanyanya kushanda manejimendi. Zvigadzirwa zvedu zvinopfuudza iyo ISO 9001-2015 (IS09001: 2015), ISO14001-2015, OHSAS 18001: 2007, API Spec 7-1). Isu tinopa maturusi ekuchera oiri uye masevhisi anoenderana nevatengi muNorth America, South America, Russia, Ukraine Central Asia, uye Southeast Asia. Basa redu: "Solution yekumhanyisa kuchera mafuta".
Zvichakadaro, isu tinopa OEM sevhisi kumakambani makuru epasirese uye kupa vatengi zvigadzirwa zvakagadzirwa uye masevhisi.
Kubva ma1980s, vedu vepamoyo tekinoroji vashandi vakatanga basa ravo mukutsvaga, kusimudzira, kugadzira uye kushandisa PDC bit sechizvarwa chekutanga chehunyanzvi muChina.
Muna 2008, DeepFast yakavambwa.
Kubva 2010, isu takatanga iko kutsvagisa, kusimudzira, kugadzira uye kushandiswa kwepamusoro kuita kudonha mota.
Muna 2016, SGDF yakavambwa nehunyanzvi hweGerman, hunyanzvi mukutsvagisa, kusimudzira uye kugadzirwa kwemhando yepamusoro-yekudzika mota.